Cameron.....: August 2014
Its more seem is smiling but I am dying inside. You don't know how much I miss you. Nobody knows because I never show...Baby... Listen!!!
ဒီကလေးမလေးကို စန္ဒီမြင့်လွင်နဲ့ အသံနဲ့စတိုင်လ် ခပ်ဆင်ဆင်တူလို့ သတိထားမိခဲ့တယ်...။ သူ့အရင် အယ်လ်ဘမ် မိုနိုပိုလီကိုလည်း နားထောင်းဖူးခဲ့တယ်...။ အဲကတည်းကို သူ့ကို သဘောကျနေခဲ့တာ...။ ခု ဒုတိယအယ်လ်ဘမ် ပစ်တိုင်းထောင်ထဲက “အလွမ်းရဲ့ထုထည်” ကို နားထောင်ရတာ ပိုပြီး ခံစားသက်ဝင်မိတယ်...။ ပတ်ဝန်းကျင် အပံ့အပိုးနဲ့ ခုတလောလောဆယ်ရေးနေတဲ့ အက်ဆေးရဲ့ ခံစားမှုတွေနဲ့ ထပ်တူနေလို့လဲ ပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်...။
မိုးအေးအေးမှာ ကိုယ်ချစ်သောသူနဲ့ အေးချမ်းသော ပိတ်ရက်ကလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ...း)
Posted by Cameron at 15:503comments:
ကြောင်လျှာသီးကို မစားဖြစ်တာ အတော်ကြာပေါ့...။ စားဖြစ်ခဲ့တာလဲ ကြောင်လျှာသီးသုပ်လောက်ပဲ စားဖူးခဲ့တာ...။ ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလေ..။ ဟိုနေ့ကဈေးထဲမယ် တောသည်တွေလာရောင်းတဲ့ ကြောင်လျှာသီးတွေ့လို့ဝယ်လိုက်တာ သုံးချောင်းကိုတစ်ထောင်တဲ့..။ အဒေါ့်အိမ်ကို နှစ်ချောင်းပေးလိုက်တယ်...။ အဲဒါ မီးဖုတ်ပြီး ပါးပါးလှီး ကြက်သွန်နီဆီချက်လေးနဲ့ သုပ်စားရတယ်တဲ့..။ ဒါမှမဟုတ် ပါးပါးလှီးပြီး ဆန်ဆေးရေလေးနဲ့ ဆားနဲ့ အချဉ်စိမ်ပေါ့...။ အိမ်မှာ မနေ့က သက်သတ်လွတ်စားဖြစ်တော့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲချက်တာ မစားလိုက်ရဘူး ..။ ဒါနဲ့ ညှပ်ခေါက်ဆွဲဖတ်တွေကို အရွက်အစုံနဲ့ မြေပဲနှမ်းထောင်းငရုတ်သီးဆီချက်နဲ့ ရှမ်းရှာလကာရည်နဲ့ ကြာညို့နဲ့သုပ်စားလိုက်တယ်...။
အဲဒါသုပ်စားရင်းက မီးဖိုနားမယ် ကြောင်လျှာသီးတွေ့လို့ လုပ်စားဦးမယ်ဆိုပြီး ပါးပါးလှီးရေဆေးလိုက်တယ်...။ ညီမလေးက အကြံဝင်ပေးတယ် ချဉ်ပေါင်ကြော်သလို ကြော်စားကြည့် သိပ်ကောင်းတာတဲ့...။ ပထမတော့ မနက်ဖန်ထမင်းချိုင့်အတွက် သုပ်စားဖို့အဆင်သင့်လုပ်မလို့ပဲ အဲဒါနဲ့ပဲ ကြက်သွန်ထောင်း ပုစွန်ခြောက်ထောင်းပြီး ငရုတ်သီးခွဲခြမ်းလေးနဲ့ကြော်လိုက်တယ် ငံပြာရည်လေးနဲ့...။ အိုးး ဘာပြောကောင်းမလဲ ပုစွန်ခြောက်နိုင်းချင်းနဲ့ဆိုတော့ မွှေးနေရောပဲ သက်သတ်လွတ်သမား မေ့ပြီး တစ်ဖတ်မြည်းကြည့် လိုက်သေးတယ်...။ အဲဒါ ထမင်းပူပူလေးနဲ့နယ်စား ဆွေမျိုးမေ့ပေါ့...။
ကြောင်လျှာသီး တစ်ခု ( ပါးပါးလှီး သုံးရေလောက်ဆေးပစ်ပြီး အရေညှစ်ထား )
ဆီပူလာရင် ကြက်သွန်နီပါးပါးလှီးထားတာကို ထည့်ကြော် ကြက်သွန်ဝါရောင်သန်းလာရင် ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ပုဇွန်ခြောက်ရောထောင်းထားတာထည့်မွှေ ပြီးတာနဲ့ ငရုတ်သီးကြမ်းမှုန့်ထည့်ကြော် ကြောင်လျှာသီးထည့် ဆား ငံပြာရည်ထည့် မီးလျှော့ပြီး ခပ်ဖြေးဖြေး ကြောင်လျှာသီးနွမ်းလာတဲ့အထိကြော်ပေးရင် ရပါပြီ...။ ကြောင်လျှာသီးကအပူစာပါ ကိုယ်ဝန်တည်ခါစအမျိုးသမီးများ မစားဖို့သတိပေးပါတယ်...။ အဲပုံကို ဖဘမှာတင်တော့ ကိုယ်ဝန်ငါးလရှိညီမ၀မ်းကွဲက နက်ဖန်ကျ အိမ်လာပို့ပေး ဆိုပြီး ကော်မန့်ပေးသွားတယ်..။ နိုးနိုးနိုး သမီး အာ့စားလို့ မရပါဘူးလို့ ပြန်ရှင်းပြရတယ်...။
Posted by Cameron at 12:143comments:
မုန့်လင်မယား မုန့်မောင်နှမ မုန့်အိုးလေး စသဖြင့်ခေါ်ကြပေမယ့် ကျွန်မကတော့ မုန့်အိုးလေးလို့ပဲခေါ်ချင်တယ်...။ ထားပါလေ..။ ဒီမုန့်လေးလုပ်စားချင်နေတာကြာပေါ့.. အိုးလက်ဆောင် ရထားတာပဲ နှစ်ပေါက်တော့မယ်လေ..။ အဲအိုးလေးကို စကာင်္ပူအလည်သွားတဲ့ အဒေါ်တစ်ယောက် လက်ဆောင်ပေးထားတာ တစ်ခါ ဒီမှာတင်ဖူးပါတယ် အိုးလေးတွေကို...။ မူစတာဖါ ကုလားကုန်တိုက်က ၀ယ်ခဲ့တာတဲ့... စလုံးတစ်ဆယ်ပဲပေးရတယ်ဆိုလားပဲ တန်တယ်တကယ်...။
ဈေးသွားပြီး ပဲပြုတ်တို့ ကြက်သွန်မှိတ်တို့ဝယ်ရမှာပျင်းတာ...။ အဲဒါမနေ့ညနေကတည်းက စီးတီးမတ်ကနေ ဆန်မှုန့်ထုပ်တွေ ပဲမှုန့်ထုပ်တွေ ငုံးဥတွေဝယ်လာလို့ လုပ်စားလိုက်တာ...။ တကယ်လုပ်ရတာလွယ်တယ်..။ ဖဘက Lin Thawdar ဆီကနေ recipe လေးရလို့ အဲအတိုင်းလုပ်ကြည့်တာ...။
ဆန်မှုန့်5ဇွန်း
ကောက်ညှင်းမှုန့်2ဇွန်း
ပဲစိမ်းမှုန့်2ဇွန်း
အဲဒါတွေအကုန်ရောမွှေပြီး မုန့်ဗန်းကိုအပူပေး ပူလာရင် မီးလျှော့ထား အိုးကမကပ်တဲ့အိုးမို့ ဆီများများထည့်စရာမလိုဘူး..။ မုန့်က မကြာခဏအနည်ထိုင်သွား တတ်တာမို့ ကြော်မယ်ဆို မွှေပေးပါ ပြီးရင် လက်ကိုင်တဲ့ခွက်ထဲထည့်ပြီး မုန့်အိုးခွက်ထဲကို တစ်ဝက်လောင်းထည့် ငုံးဥဖောက်ထည့် ဒီတိုင်းလေး ခဏပစ်ထားလို့ရတယ်...။ ငါးမိနစ်လောက်ဆို မုန့်တွေကျွတ်လာပြီး ငုံးဥတွေကျက်လာပြီဆို ဇွန်းလေးနဲ့ကော်ထုတ်လိုက်...။ ပူပူနွေးနွေးတခါတည်း စားပါ...။ အရသာအလွန်ကောင်းမွန်လှပါကြောင်း အာမခံပါသည်...အလဲ့...း)) ။ အခါးရည်ပူပူလေးနဲ့တွဲစား ပိုကောင်းသေး...။
ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ရှမ်းပြည်မှာစားဖူးတဲ့ မုန့်အိုးလေးကတော့ ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး ...။ ခုလည်းလုပ်ရောင်းဦးမယ်ထင်ပါတယ် ဟိုတလောကပြန်သွားတော့ ၀ယ်မစားဖြစ်လိုက်ဘူး..။ သူက အုန်းနို့ဆမ်းပြီးကြော်ရတာ...။ ပဲမှုန့်လည်းပါပုံမရဘူး... ခုက အဆိမ့်အရသာမို့ ပဲမှုန့်ထည့်တယ်ထင်တာပဲ..။ ရှမ်းပြည်မှာက ဆန်မှုန့်ဖျော်အရည်ထည့် ပြီးတော့ အုန်နို့တစ်ဇွန်းထည့် မုန့်ရရင် သကြားနဲ့စားကြတယ်...။ အချိုပေါ့ သူက...။ အုန်းနို့နံ့လေးမွှေးပြီး ချိုတဲ့အရသာမျိုး...။
Posted by Cameron at 11:223comments:
ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းပါ အလွမ်းများနဲ့ ငါငိုနေဆဲပဲ ~~~~ မိုးစက်လေးရယ် ..
ပိုပိုတဲ့ ကိုယ်သူ့ကို သိပ်မသိဘူး....။ သိပ်မသိဘူးဆိုတာထက် သိကိုမသိတာ...။ အဆိုတော်အသစ်လား မသစ်တသစ်လားတော့ မသိဘူး ...။ အဲသီချင်းလေး ညီမလေးဆီကကြားလို့ ကြိုက်တာနဲ့ ဖုန်းထဲထည့်ထားလိုက်တယ်...။ ကိုယ်လည်း နည်းနည်းတော့ Update လုပ်ရမယ်...ခေတ်နဲ့မျက်ခြေပျက်လို့ မဖြစ်ဘူး...။
မိုးကတော့ သူ့ဝတ္တရားအတိုင်း အေးအေးဆေးဆေးကို ရွာနေလိုက်တာ မနက်ကတည်းကနေ ညနေထိပါပဲ…။ သည်းသည်းမဲမဲမဟုတ်ပေမယ့် ရွာနေတဲ့အချိန်ကြာတော့ ထုံးစံအတိုင်းလမ်းပေါ်မှာ ရေတွေလျှံတဲ့နေရာ လျှံပေါ့…။ တချို့နေရာတွေဆို ရေတောင်ကြီးတယ်တဲ့…။ အိမ်ရောက်ခါနီး လမ်းလေးထဲကို ချိုးကွေ့ ၀င်လိုက်ရင်ဆိုပဲ… ကိုယ့်လက်ထဲက ခြင်းတောင်းလေးကို ဆွဲယူလိုက်တာခံရတော့ ထစ်ခနဲဖြစ်သွားတဲ့စိတ်နဲ့ လှည့်ကြည့်လိုက်တာ…။
“မမကို ကျွန်တော်ဒီလမ်းကစောင့်နေတာ သုံးရက်ရှိပြီ ခုမှပဲတွေ့ရတော့တယ်”…
ကိုယ်မင်းကို ဘာပြောရမှန်းမသိ စက္ကန့်တော်တော်ကြာအောင် ပြန်ပြီး ငေးစိုက်ကြည့်နေမိတယ်….။
“ဘာ..ကြောင်ကြည့်နေတာလဲ …လာ ကျွန်တော်တို့အတူ ကော်ဖီသောက်ရအောင်..” ဆိုပြီး မင်းကထီးကိုင်ထားတဲ့လက်နဲ့ ခြင်းတောင်းကိုပါကိုင်ပြီး ကျန်လက်တစ်ဖက်နဲ့ကိုယ့်လက်ကို ဆွဲယူလိုက်တယ်…။ မင်းလက်တွေက မိုးရေတွေစိုရွှဲလို့…။
အို…. ကိုယ်အိပ်မက်မက်နေတာလား…။ တကယ်… အိပ်မက် မဟုတ်ပါဘူးနော်…။
ကော်ဖီဆိုင်ကလမ်းမကြီးဖက်မှာမို့လို့ ကိုယ်တို့ လမ်းလေးထဲကိုမ၀င်တော့ဘဲ လာရာလမ်းဘက်ကို ပြန်လျှောက်လိုက်ကြတယ်…။
မင်းက ကိုယ်မိုးရေမစိုအောင် ထီးကို ကိုယ့်ဖက်ငဲ့ပြီးစောင်းပေးလို့ မင်းပခုံးတစ်ဖက် မိုးတွေစိုကုန်တယ်…။ မိုးထဲမှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့မင်းကို လက်တွဲပြီး ထီးတစ်ခုထဲအောက်မှာ အတူလမ်းလျှောက်ရလိမ့်မယ်လို့ အိပ်မက်တောင်မမက်ဖူးခဲ့ဘူး ကိုယ်ဖြင့်ပျော်လိုက်တာ…။ မိုးထဲမှာလမ်းလျှောက်ရင်း ကိုယ်တို့ ဘာစကားမှ မပြောဖြစ်ကြဘူး…။ မင်း …ဘာတွေတွေးနေမလဲ ကိုယ်မသိပေမယ့်… ကိုယ်ကတော့ အိပ်မက်ယောင်နေသူ တစ်ယောက်လို ခုအဖြစ်အပျက်လေးဟာ အိပ်မက်မဟုတ်ပါစေနဲ့လို့ စိတ်ထဲကြိမ်ကြိမ် ရေရွတ် ကြိတ်ပြီး ဆုတောင်းနေတာ ကော်ဖီဆိုင်မရောက်မချင်းပါပဲ…။
တော်သေးတယ် ကော်ဖီဆိုင်လေးမှာ ခုံလွတ်တွေရှိနေသေးလို့…။ ကိုယ်တို့နေရာယူလိုက်တော့ မင်းက အမေရီကန်နိုအပူ နှစ်ခွက်နဲ့ ချိစ်ကိတ်မှာလိုက်တယ်…။ ခုချိန်ထိမယုံနိုင်ဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ့်ကိုမင်းက သေချာစိုက်ကြည့်ပြီး ပြုံးရယ်နေတယ်…။ မင်းအပြုံးတွေက ခုချိန်ထိ ကိုယ့်ကို လတ်ဆတ်စေမြဲပဲ သိလား..။ မင်းပါးပြင်ပေါ်က ယှက်နွယ်နေကြတဲ့ ခရမ်းရောင်အစိမ်းရောင်သွေးကြောလေးတွေကို ကိုယ်လက်ညိုးနဲ့တို့ကြည့်လိုက်တယ်…။ မင်းအသားကို ထိလို့ရတယ်ဆိုတော့ ဒါအိပ်မက်မဟုတ်ဘူးပေါ့ ဟုတ်လား အိန်ဂျယ်…။ မင်းက ကိုယ့်လက်ကိုဆွဲယူဆုတ်ကိုင်လိုက်တယ်…။ စောစောက မိုးစိုနေပေမယ့် မင်းလက်ဖ၀ါးတွေက နွေးထွေးလိုက်တာ…။
“အိပ်မက်ဆိုရင် ကိုယ်တော့ ဘယ်တော့မှမနိုးထချင်တော့ဘူး…အိန်ဂျယ်… မင်းကိုယ့်အနားကနေ ထပ်ပြီး ပျောက်ကွယ်သွားမှာကို ကိုယ်သေမလောက်ကြောက်တယ်ဆိုတာ မင်းသိလား…”
“ကျွန်တော်တို့ မိုးမတိတ်မချင်း ဒီမှာထိုင်ကြမယ်…အေးဆေးစကားပြောကြမယ်နော်… မမနဲ့ မတွေ့ဖြစ်တာ ဘယ်လောက်တောင်ကြာနေပြီလဲ….”တဲ့ ။
ကိုယ့်ကို စိုက်ကြည့်နေတဲ့ မတိုမရှည်မျက်တောင်နက်နက်စိပ်စိပ်တွေနဲ့ဝန်းရံထားတဲ့ မင်းမျက်ဝန်းတွေက တဖျတ်ဖျတ်နဲ့ ရွှန်းလက်တောက်ပလို့….။ မင်းနှုတ်ခမ်းထူထူတွေက အခါတိုင်းလိုရွှန်းစိုနီရဲမနေဘဲ မှိန်ဖျော့နေကြတယ်…။ မိုးစိုလို့မင်းသိပ်အေးနေလား အိန်ဂျယ်…။ ဒါပေမယ့်လည်း မင်းနှုတ်ခမ်းတွေ နွေးထွေးသွားဖို့ ကိုယ်ကစပြီး လုပ်ပေးပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး…။
အငွေ့ထောင်းထောင်းထတဲ့ ကော်ဖီနှစ်ခွက် ကိုယ်တို့ရှေ့ကိုရောက်လာတယ်…။ မင်းက ကိုယ့်ကော်ဖီခွက်ထဲကို သကြားညိုနှစ်ခဲထည့်ပြီး နို့နဲ့ရောမွှေလိုက်တယ်…။ ကိုယ်ကြိုက်တတ်တဲ့ ခါးဆိမ့်အရသာကို မင်းမမေ့သေးဘူးပဲ…။ … ကော်ဖီငွေ့တွေက ကိုယ့်မြင်ကွင်းကို ၀ိုးဝါးကွယ်လိုက်ကြတယ်…။ ဟင့်အင်း ခုချိန်မှာ မင်းကို ကိုယ်မျက်စေ့အောက်ကတောင် အပျောက်မခံနိုင်ပါဘူး…။
ကော်ဖီခွက်ကို ကိုင်ပြီးသောက်နေတဲ့မင်းကို ဘာလို့လဲမသိ ကောဖီငွေ့တွေက ခပ်ပါးပါး ကွယ်ရာကနေပြီး… တဖြေးဖြေးမှောင်မိုက်ပိန်းပိတ်လာကြတယ်…။ အိန်ဂျယ့်ကို ကိုယ်ယောင်မဖျောက်ပစ်လိုက်ပါနဲ့ … ကိုယ်တောင်းပန်ပါတယ်…။ ကိုယ့်အနားကနေ ထပ်ပြီး ပျောက်ကွယ်မသွားပါနဲ့…။
“အိန်ဂျယ်…အိန်ဂျယ်….အိန်ဂျယ်….” နှုတ်ကရွတ်ဆိုပြီး ကိုယ်လန့်နိုးလာတော့ အမှောင်တိုက်ထဲမှာ…။ ဘယ်ချိန်ရှိနေပြီလဲ… ဘာမှလဲမမြင်ရဘူး…။
အိပ်မက်ထဲမှာတောင် အိပ်မက်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ အခါခါညည်းညူရွတ်ဆိုဆုတောင်းနေခဲ့ပေမယ့် ကိုယ်ဆုတောင်းမပြည့်ခဲ့ဘူး…..။ အပြင်မှာ မိုးတွေတစက်စက်နဲ့ရွာနေတုန်းပဲ….။ အိပ်မက်နဲ့မတူတဲ့ အိပ်မက်ထဲက တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးကို မပျောက်ကွယ်အောင် ကိုယ်ဘယ်လိုသိမ်းထားရပါ့မလဲ…။
ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ထဲဖတ်လို့ရတဲ့ ဒီနေရာလေးမှာပဲ မင်းအိပ်မက်ကို ကိုယ့်တစ်သက်တာအတွက် အမှတ်တရသိမ်းဆည်းမယ်…မင်းသဘောတူတယ်မဟုတ်လား…။
Posted by Cameron at 13:07 No comments:
ကြာသပတေးဆွမ်းဟင်းချက်တဲ့မနက်က အသားနဲ့ဟင်းရည်နှစ်မျိုးပဲဖြစ်နေလို့ အသီးအရွက် တစ်ခုခုကြော်ရအောင် ရေခဲသေတ္တာထဲမွှေလိုက်တော့ မုန်လာဥဖြူ နှစ်လုံးတွေ့တာနဲ့ white radish pan cake လေးကြော်ဖို့စိတ်ကူးရသွားခဲ့တယ်...။ ကြော်နည်းလေးပြောပြမယ်နော်...။
ဂျုံမှုန့် ၄ ဇွန်း
ပြောင်းကော်မှုန့် ၁ ဇွန်း
ဆား လက်ဖက်ရည် ၁ဇွန်းတစ်ဝက်
မုန်လာဥကို ဂျစ်နဲ့ အမျှင်လေးခြစ် ဇလုံတစ်ခုထဲထည့်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးထည့် ငရုတ်ကောင်းက ကြိတ်စက်လေးရှိရင် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် တစ်ခါထည့်လှည့်ပြီးထည့်..မရှိရင် လှော်ပြီး ထောင်းထည့်..။
နယ်ထားတဲ့ မုန်လာဥမုန့်နှစ်ကို သုံးပုံပုံပြီး ပန်ကိတ်သုံးချပ်ရအောင်ကြော်မယ်...။ ဒယ်ပြားကိုအပူပေးပြီး သံလွင်ဆီလေးနည်းနည်းထည့် မုန့်နှစ်လေးကို ဖွဖွခပ်ထည့်ပြီး ဘေးဖက်ကို အ၀ိုင်းလေးဖြစ်အောင် ယောက်မနဲ့တဖြေးဖြေးချဲပေးပါ...။ တစ်ဖက်လှန်ပြီးရင် ယောက်မနဲ့ ဖိပြီးကြော်ပေးပါ...။ ငရုတ်ကောင်းနံ့လေးမွှေးပြီးစားကောင်းလှတဲ့ မုန်လာဥပန်ကိတ်ကို ထမင်းနဲ့ပဲစားစား သရေစာအဖြစ် ဆော့နဲ့တို့စားစား အရမ်းကောင်းပါတယ်...။
Posted by Cameron at 09:02 1 comment:
Labels: simply coral's kitchen (သက်သတ်လွတ်ဟင်း), simply coral's kitchen(သရေစာများ)
Posted by Cameron at 11:042comments:
Posted by Cameron at 10:503comments:
ငါးခေါင်းဟင်းကိုတစ်ခါမှမချက်ဖူးဘူး...။ ကိုယ်က ငါးဟင်းမကြိုက်တာလည်းပါတယ်...။ အိမ်မှာ ပျဉ်းမနား မျှစ်ချဉ်တစ်ထုပ်ရောက်နေလို့ ၀က်ရိုးနဲ့ချက်ဖို့ကလည်း ခုတလော ၀က်နားရွက်ပြာရောဂါတဲ့ ၀က်သားဝယ်မစားတာကြာပေါ့...။ အဲမတိုင်ခင်ကတော့ ၀က်သားကိုဓါတ်ကျလိုက်ပါသေးတယ်..။ အခု ငါးကြင်းခေါင်းတစ်လုံးဝယ်ခဲ့တယ်...။ ငါးသည်က တစ်ခြမ်းပဲခြမ်းပေးလိုက်တာ ထပ်ပြီးမခုတ်ပေးဘူး...။ ငါးခေါင်းရဲ့မာချက်က အိမ်ကဓါးမနိုင်ဘူး...။ မရရအောင်ခုတ်ထစ်ရတာပေါ့...။ ကိုယ်တွေက ငါးဆို အညှီကြောက်တာနဲ့ဘာနဲ့မို့ ဆီသတ်ချက်လိုက်တယ်...။ ဟင်းအနှစ်တွေလုပ်နေတုန်း မျှစ်ချဉ်ကိုတစ်ရေ အရင်ပြုတ်ထားတယ်...။ ဟင်းအနှစ်က ဘာမှထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ပါဘူး ကြက်သွန်နီနှစ်လုံး အဖြူ ငါးမွှာ ဂျင်းလက်တစ်ဆစ်နဲ့ စပါးလင်တစ်ချောင်းကို ဆုံနဲ့ထောင်းထားလိုက်တယ်...။ တခါတည်း ငရုတ်သီးအရောင် နနွင်းထည့်ထောင်းတယ်...။ ဆီသတ်တော့ ဆီဟင်းခတ်ဇွန်းကြီးတစ်ဇွန်းထည့်ပြီး ဆီပူလာရင် အနှစ်ကိုဆီသတ် အနှစ်မွှေးလာရင် ငရုတ်သီးစိမ်းအပွတောင့်နှစ်တောင့်ဓါးပြားရိုက်ထည့် ခရမ်းချဉ်သီးနှစ်လုံးအစေ့ထုတ်ပြီး လက်နဲ့ပဲချေထည့်တယ် ပြီးတာနဲ့ငါးခေါင်းထည့်မွှေ.. အနှစ်အိုးကပ်လာခါနီးရင် ပြုတ်ထားတဲ့မျှစ်ချဉ်ထည့် ဆားဟင်းခတ်မှုန့်ထည့် ရေမြှုပ်အောင်ထည့်ပြီး နာရီဝက်လောက် မီးအေးအေးနဲ့တည်ထားပါ...။ မျှစ်ချဉ်အချဉ်နဲ့ငါးခေါင်းအချိုအရသာက ဘယ်လိုကောင်းမှန်းမသိ...။ ၀က်ဆီဥက ကွကိုယ်ကြော်တာမဟုတ်ဘူး..။ဈေးထဲက တိုဖူးသုပ်ရောင်းတဲ့ တရုတ်မဆီက ၀ယ်ခဲ့တာ တစ်ပွဲကိုတစ်ထောင်တဲ့...။ ငွေနှင်းမှိုနဲ့ ကန်ဇွန်းကို ငရုတ်သီးအချို(ကြက်တံဆိပ်)နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်သီးစိမ်း ခရုဆီနဲ့ကြော်တယ်...။ ငရုတ်သီးငံပြာရည်ဖျော် အရမ်းစားချင်လွန်းလို့..။ တာချီလိတ်ပြန်တုန်းက ၀ယ်ခဲ့တဲ့ ရှမ်းငရုတ်သီးမှုန့် ဘတ်နှစ်ဆယ်ဖိုးကို ဆီလေးနဲ့ပြန်ကြော်ပြီး ပုလင်းလေးနဲ့သိမ်းထားတာ..။ ငရုတ်သီးမှုန့်တစ်ဇွန်းနဲ့ ငံပြာရည်နဲ့ဖျော်ပြီး ဒညင်းဝက်ကြော် သခွားသီး ရုန်းပဒေသီးပြုတ်တို့နဲ့ တို့တယ်...။
အိမ်မှာ ၀ါဆိုလပြည့်နေ့က သက်သတ်လွတ် အာလူးထမင်းနဲ့ အချိုပွဲနို့ကော်ဖီကျောက်ကျော ဘုရားကပ်ခဲ့တယ်... ဘုရားကိုတော့ လူများလို့မသွားဖြစ်ဘူး...။
ပထမအလွှာ နို့စိမ်းတစ်ဗူး သကြားနဲ့ တယ်လီဖုန်းတံဆိပ်ကျောက်ကျော
ပထမနို့စိမ်းလွှာအေးပြီးခဲပြီဆိုမှ ကော်ဖီ သကြားနဲ့ တယ်လီဖုန်းကျောက်ကျောကို အပေါ်ကထပ်လောင်းတယ်
ညကတည်းက ကျိုထားတဲ့ ကျောက်ကျောတစ်ဗန်းကို တခါသုံးပန်းကန်ပြားလေးထဲလှီးထည့်လိုက်တာ ရှစ်ပွဲရတယ်...။ ကိုယ်တို့နေတဲ့ ကျွန်းတောလမ်းက ဓမ္မာရုံမှာ ဘုန်းဘုန်းတွေနဲ့ ဥပုသ်သည်တွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ထားတာ ...။ နေ့ဆွမ်းအမီဆိုတော့ မမေးထားမိပဲနောက်ကျမှသွားလို့ ဘုန်းဘုန်းတွေကကြွကုန်ပြီ ဥပုသ်သည်တွေကလည်း သီလယူပြီး ပြန်ကုန်ပြီဆိုလို့ အိမ်နားက အသိအစ်မအိမ်ကို ကြွတဲ့ ဘုန်းဘုးန်းတွေကိုပဲကပ်လိုက်ပါတယ်...။ ဒီနှစ်ဝါတွင်းကို ဥပုသ်နေ့တုန်း ဓမ္မာရုံမှာ အချိုပွဲပုံမှန်ကပ်မယ်လို့...။ နောက်ပတ်များမှာ တခြားတခြားသော ကျောက်ကျောမျိုးစုံလင်ကို ထပ်တင်ပါဦးမည်..။
သက်သတ်လွတ်စားဖြစ်တဲ့ ၀ါဆိုလပြည့်နေ့တုန်းက အာလူးထမင်းချဉ်လုပ်စားဖြစ်ခဲ့တယ်...
Posted by Cameron at 12:395comments:
ဒီနေ့မိုးရွာပုံက ယောက်ျားတစ်ယောက် ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုနေပုံနဲ့တူတယ်….။ တစ်ကိုယ်လုံးတုန်ခါပြီး တအင့်အင့်နဲ့ ကျိတ်ကျိတ်ပြီး ၀မ်းပန်းတနည်း ရှိုက်ငင်နေတာမျိုး…။ ဘာဖြစ်လို့လဲဟင်… ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်ငိုနေရသလဲလို့ ကိုယ်တိုးတိတ်တိတ်ကလေး မေးကြည့်မိတယ်…။ သူဘာမှပြန်မဖြေဘူး…။ ကိုယ့်လိုပဲ သူလဲ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို လွမ်းနေလို့များလား…။ သူ့ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်ပါလွမ်းပြီး ငိုမိတယ်…။ ပြီးတော့ ပြူတင်းမှန်ကို လာထိမှန်တဲ့ မိုးစက်သံတွေက တစ်ယောက်ယောက် တံခါးလာခေါက်နေသလိုလို…။
ဒီမိုးတတွင်းလုံးမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အလွမ်းတွေချည်းပြည့်နှက်နေတော့မှာပဲ….။ ကိုယ့်ရဲ့မိုးရာသီအလွမ်းတွေကရော ဘယ်တော့မှဆုံးမလဲ…။ ဟင့်အင်း အိန်ဂျယ်… မင်းကိုယ်နဲ့ လိုက်ပါနေသရွေ့တော့ မိုးကိုချစ်ပြီး မင်းကိုလွမ်းတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ မိုးရာသီအလွမ်းတွေဟာလဲ ဘယ်တော့မှ အဆုံးသတ်မှာ မဟုတ်ဘူး…။
မင်းလည်း မိုးအေးအေးမှာ ကွန်ပြူတာရှေ့ ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်နဲ့ ကိုယ့်မိုးရာသီအလွမ်းလေးကိုဖတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုသတိတရနဲ့တခါတခါပြုံးမိနေမလားပဲ….။ ကိုယ်ကတော့ ခုတလော မင်းနဲ့နီးနီးစပ်စပ်ရုပ်ချင်းဆင်တဲ့ မင်းသားပါတဲ့ ဇာတ်ကားလေးကိုကြည့်ရင်း မင်းကို လွမ်းနေတတ်သေးတာ…။ အင်းလေ… မိုးရွာလည်းလွမ်း နေပူလည်းလွမ်း သီချင်းနားထောင်လည်းလွမ်း ရုပ်ရှင်ကြည့်လည်းလွမ်းနဲ့….။ ဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်သော မင်းကိုလွမ်းခြင်းတွေ....နောက်ထပ် နောက်ထပ်....။
Posted by Cameron at 09:373comments:
မိုးရာသီမှာ သောက်ဖြစ်တဲ့ ကော်ဖီပူတစ်ခွက်ဟာ မိုးသံကို နားထောင်ပြီး သောက်ရလို့လားမသိဘူး တကျိုက်မော့သောက်လိုက်တာနဲ့ ခေါင်းထဲကို ကြည်သွားတာပဲ…။ ကော်ဖီတွေပူလို့ မှုတ်သောက်ရတဲ့အခါတိုင်း မင်း ကိုယ့်ကို သတိမရဘူးလား…အိန်ဂျယ်…။ မင်းက ကွန်ပြူတာတစ်လုံးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဘေးနားက ဖျော်လက်စ ကော်ဖီပူပူလေးကို မြန်မြန်သောက်လို့ရအောင် မင်းနဲ့စကားပြောရင်း ကော်ဖီလေးနွေးသွားအောင် တယုတယ ကိုယ်မှုတ်ပေးခဲ့ဖူးတာကိုလေ...။
ခုလို မိုးအေးအေးမှာ စောင်ခြုံကွေးထဲ ကြောက်လည်းကြောက်ပေမယ့် မင်း သရဲကားတွေကို ကြည့်ဖြစ်နေသေးလား…။ အဲခါမျိုးမှာ မင်းမကြောက်အောင် စကားလာလာပြောပေးတဲ့ ကိုယ့်ကို မင်းမလွမ်းဘူးလား အိန်ဂျယ်…။ အဲဒီတုန်းက မင်းကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုဇာတ်လမ်းပြောပြခဲ့ဖူးတယ် အိန္ဒိယသရဲကားကို ရုံတင်တော့ သွားကြည့်ဖြစ်သေးတယ်…။ မင်းပြောပြထားခဲ့ဖူးလို့ ဇာတ်လမ်းလေးကို ကြိုသိပေမယ့်လည်း သဲထိတ်ရင်ဖိုနဲ့ကြည့်ခဲ့ရတုန်းက ရုပ်ရှင်ရုံအမှောင်ထဲမှာ မင်းကို လွမ်းမိသေးတယ်..။
ပြောရင်း ဆိုရင်း မိုးတွေသည်းလိုက်လာလိုက်တာ…။ ခုနေ မိုးရေထဲ ထီးမပါဘဲ လမ်းလျှောက်ရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ…။ တစ်ကိုယ်လုံး စိုရွှဲသွားတဲ့ အေးစိမ့်စိမ့်အရသာမျိုး… တစ်စုံတစ်ယောက်များ ကြင်နာစွာ ထီးလာမိုးပေးမလားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့လေ….။ ကိုယ်စိတ်ကူးယဉ်လွန်သွားပြန်ပြီ အိန်ဂျယ်….။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကို ကဗျာရေးပေးခဲ့ဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုတင်စားပြောဖူးခဲ့တယ်…။ ကိုယ်ဟာ ပလပ်စတစ်ပန်းတွေ ၀တ်မှုံကူးတာကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတဲ့…။ အဲသလောက်ထိ ကိုယ်ဟာ စိတ်ကူးကမ္ဘာထဲ မွေ့လျော်တတ်သူလေ…။
Posted by Cameron at 14:332comments: